MGBE AKW MODKWỌ AKW MODKWỌ AKW WITHKWỌ NA-AKW COMKWỌ AKW CNCKWỌ CNC CNC - Gaa! ECTlọ akwụkwọ SPECTROOM
MGBE AKW MODKWỌ AKW MODKWỌ AKW WITHKWỌ NA-AKW WITHKWỌ AKW CNCKWỌ AKW CNCKWỌ CNC
Nke gara aga	Ọzọ
Site na ịzụta igwe CNC nke 5-axis na-achịkwa kọmputa, anyị dị ka ụlọ akwụkwọ maara nke ọma na ọdịnihu nke usoro ọzụzụ osisi anyị. Anyị osisi ngalaba ga-gbasaa nke ukwu na-abịa afọ na a nso maka nzube ọ bụla.
Igwe CNC bu ihe eji eme ihe nke choputara ihe oru di iche-iche na-ejikwa teknụzụ a na-ejikwa kọmputa. Afọ 20 gara aga, naanị nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ osisi nwere igwe CNC. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mpaghara ahụ na-ejide oge na nhazi na digitization. Dịka ọmụmaatụ, igwe CNC na-aghọwanye ọkọlọtọ na obere ụlọ ọrụ na ọ gaghị ekwe omume iche n'echiche ngalaba osisi na-enweghị ya.
"Ihe mmemme dijitalụ adịghị mfe, mana ọ na - eme ka ngwaahịa zuru oke. Ọ masịrị m nke ukwuu na m nwere ike ịmụ ihe a n'oge ọzụzụ osisi m. " - Ismaël, nwa akwukwo Wood Learning + Na-arụ ọrụ
Dị ka ụlọ akwụkwọ, anyị na-agba mbọ ịkwadebe ndị na-eto eto anyị n'ụzọ dị mma maka ọnọdụ dị ugbu a n'ebe ọrụ. Site na itinye ego a, anyị chọrọ inye ụmụ akwụkwọ anyị ihe ọmụma na nka dị mkpa iji dịrị njikere maka ụlọ ọrụ osisi taa. Ruo oge na-adịbeghị anya, a na-enye nkuzi CNC site na nzukọ dị na mpụga. Nke a rụpụtara obere mgbanwe na mmepe nke ọrụ agụmakwụkwọ. Na igwe na ụlọ anyị nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a na ụmụ akwụkwọ anyị na nnukwu ọrụ ọgbara ọhụrụ n'ime akụrụngwa ọkachamara. N'ụzọ dị otú a, ha bụ otu nzọụkwụ n'ihu na nkwadebe maka ebe ọrụ na / ma ọ bụ ịga n'ihu ọmụmụ na ọzụzụ osisi na GO! Slọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ọbụna karịa itinye ego na ọdịnihu dị mma.
"Site na igwe CNC anyị, anyị na-ejikọ ọdịiche dị n'etiti ọrụ na teknụzụ. Nke a bụ otu anyị si akwadebe ụmụ akwụkwọ anyị maka ahịa ọrụ nke echi. ” - Harry Schillemans, Onye nkuzi osisi
AKWURKWỌ AKWOKWỌ ANY W
Schoollọ akwụkwọ anyị, Slọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka pectdị, na-enye ihe karịrị 50 ọrụ aka na nkà na ụzụ n'ime Industrylọ Ọrụ, STEM, Egwuregwu, Ahụike, Ile ọbịa & Nkọwapụta.
Ogbogu Okonji 165